8BIT Coin စျေး - အွန်လိုင်း 8BIT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို 8BIT Coin (8BIT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ 8BIT Coin (8BIT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ 8BIT Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
8BIT – 8BIT Coin
Market ကဦးထုပ်: $37 343.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ 8BIT Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
8BIT Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
8BIT Coin8BIT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.03368BIT Coin8BIT သို့ ယူရိုEUR€0.02858BIT Coin8BIT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.02588BIT Coin8BIT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.03088BIT Coin8BIT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.3068BIT Coin8BIT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.2138BIT Coin8BIT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.7468BIT Coin8BIT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.1258BIT Coin8BIT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.04498BIT Coin8BIT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0478BIT Coin8BIT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.7678BIT Coin8BIT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.2618BIT Coin8BIT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.1788BIT Coin8BIT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.528BIT Coin8BIT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.618BIT Coin8BIT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.04628BIT Coin8BIT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.05098BIT Coin8BIT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.048BIT Coin8BIT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.2358BIT Coin8BIT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.568BIT Coin8BIT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩40.28BIT Coin8BIT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦12.768BIT Coin8BIT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.478BIT Coin8BIT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.935
8BIT Coin8BIT သို့ BitcoinBTC0.000003 8BIT Coin8BIT သို့ EthereumETH0.00009 8BIT Coin8BIT သို့ LitecoinLTC0.000585 8BIT Coin8BIT သို့ DigitalCashDASH0.000389 8BIT Coin8BIT သို့ MoneroXMR0.000389 8BIT Coin8BIT သို့ NxtNXT2.77 8BIT Coin8BIT သို့ Ethereum ClassicETC0.00472 8BIT Coin8BIT သို့ DogecoinDOGE9.97 8BIT Coin8BIT သို့ ZCashZEC0.000408 8BIT Coin8BIT သို့ BitsharesBTS1.29 8BIT Coin8BIT သို့ DigiByteDGB1.29 8BIT Coin8BIT သို့ RippleXRP0.113 8BIT Coin8BIT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00119 8BIT Coin8BIT သို့ PeerCoinPPC0.121 8BIT Coin8BIT သို့ CraigsCoinCRAIG15.74 8BIT Coin8BIT သို့ BitstakeXBS1.47 8BIT Coin8BIT သို့ PayCoinXPY0.603 8BIT Coin8BIT သို့ ProsperCoinPRC4.33 8BIT Coin8BIT သို့ YbCoinYBC0.00002 8BIT Coin8BIT သို့ DarkKushDANK11.08 8BIT Coin8BIT သို့ GiveCoinGIVE74.76 8BIT Coin8BIT သို့ KoboCoinKOBO7.87 8BIT Coin8BIT သို့ DarkTokenDT0.031 8BIT Coin8BIT သို့ CETUS CoinCETI99.69